XOG + DHAGEYSO: DF Soomaaliya oo si kulul u beenisay warar laga faafiyay kiiska Badda! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG + DHAGEYSO: DF Soomaaliya oo si kulul u beenisay warar laga...
XOG + DHAGEYSO: DF Soomaaliya oo si kulul u beenisay warar laga faafiyay kiiska Badda!
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Ali Faqi
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Faqi
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa maalmihii la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada iyo Warbaahinta qaarkood in dhammaan qareennadii difaacayay Soomaaliya ee dhinaca dacwadda Badda gaar ahaan Muna Sharmaan oo ah gabar Soomaaliyeed oo baratay sharciga la bedelay, hayeeshee, waxaa warkaasi beenisay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Faqi ayaa sheegay in warkaasi aan waxba ka jirin, isla markaana Muna Sharmaan ay iyada la soo xiriirtay madaxweyne Farmaajo una sheegtay inay Shaqo ka heshay Bankiga adduunka.
Danjire Cali Faqi ayaa waxa uu sheegay in dhammaan qareenadii difaacayay Soomaaliya ee dhinaca dacwadda Badda ay Shaqeynayaan marka laga reebo Muna Sharmaan oo iyada iskeed u tagtay.
Halka hoose ka dhageyso Codka Safiirka: